PressReader - Kwayedza: 2018-11-16 - Kirisitu amuk
Kwayedza - 2018-11-16 - Nhau Dzemuno - Kingstone Mapupu
MUKURU weimwe chechi iri muHarare ari kuzvifanan­idza nemwanakom­ana waMwari — Jesu Kirisitu — achizviti akasandurw­a zita naMusiki ndokutumid­zwa rekuti Emmanuel.
Meki Janga (43), wepanhamba 842 kuNew Marimba, anoti inyaya yaasati oda hake kushambadz­a kuti iye ndiye Jesu mbune sezvo achiti ane vavengi vakawanda vari kuedza kumurwisa nekutsikir­ira shoko raMwari.
Janga — uyo asina zita rehukuru sezvinoitw­a nevakuru vemamwe machechi sekuzviti prophet, apostle kana kuti bishop — anoti zita rechechi yake rekuti Temple of God rakatumidz­wa naMwari, kwete naiye.
Zvisinei, Bhaibheri rinoti Jesu Kirisitu akafa akamuka uye rinoyambir­a kuti nemazuva ekupedzisi­ra kuchauya maporofita enhema apo vakawanda vacho vanenge vachizviti ndivo Jesu.
Janga kana kuti Emmanuel anoti Mwari vakauya kwaari ndokutaura naye mugore ra2013 apo ainge asati onamata vachibva vamusandur­a zita rake vachimuti Emmanuel iro rinoreva mununuri.
“Ichokwadi, vazhinji vanonditi ndini Jesu Emmanuel. Handisati ndoda kunyatsobu­da pachena nekuti nguva haisati yakwana yekuti ndizvidure kuti ndini (Jesu).
“Vari kuti ndini Jesu vanoona zviri pandiri nekuda kwesimba racho riripo. Ndakaita gore ndichitaur­a naMwari apo vakandichi­nja zita nekuzotumi­dza chechi zvakare. Vakanditi simba ravakandip­a ndichatung­amirira sangano guru zvichaita kuti nyika dzepasi rose dziuye kwandiri izvo vakati hapana mumwe wemadzibab­a angu akamboita izvi,” anodaro.
Anoti pane imwe nguva achinamata, vanhu vakaona muzvanza zvemaoko ake makaboorwa uye muchiyerer­a ropa izvo zvaanoti zvinoratid­za pachena kuti iye mutumbi waJesu akaroverer­wa pamuchinji­kwa.
Murume uyu anoti anonamata achishandi­sa Bhaibheri uyewo munhu akaroora izvo zvisina kumbobvira zvakaitwa naJesu Kirisitu mukurarama kwake.
“Hongu vanhu vemuchechi mangu nevamwe vakakomber­edza nzvimbo ino vanonditi Jesu Emmanuel, kureva kuti zvavari kuona ndizvo zviripo handizvira­mbe. Nguva ichakwana yekuti zvibude pachena, ndakamirir­a kuudzwa naMwari.
“Kunyangwe panguva yaJesu inga wani madhimoni aitaura kuti tinokuziva une simba rakanyanya saka izvi ndizvo zvimwe chete neni. Vanhu vanoona nemavanga emumaoko ropa richiyerer­a zvinoratid­za chipiyanis­o chakarover­wa mwanakoman­a waMwari,” anodaro. —
Janga anoti akaudzwa naMwari kuti acharambwa neruzhinji nekurwiswa nevanhu nekuda kwekudzika kwemutumwa kwaari.
“Handitye kurwiswa nekuti iye Jesu akarwiswa nekushungu­rudzwa, saka ndizvo zvandichas­angana nazvo.”
Anotizve haasi kutsvaga mukurumbir­a uye njere dzake “hadzinyima­ne moto” kureva kuti haasi murwe
“Handisi kutsvaga raMwari rakaburuka. Va kuti ndinorwara nepfun avo asi chokwadi chinobu daro.
Vamwe vemuchechi sinhira vachiti murume
Abigail Sendamayi Ja
Chechi yeTemple of God Mifananidz­o naNicholas Bakili